I-Samsung Voice Control Tv, iLg Voice Remote, i-Sony Tv Voice Remote-Yangkai
Ulawulo lwe-Wi-Fi olukude
Ulawulo olukude lweBluetooth
SINIKEZA IMVELISO EBALASELEYO
I-Shanghai Yangkai Electronics Co, Ltd.yishishini eliphambili kwezobuchwephesha, eligxile kwiintlobo zokupakisha oomatshini, uyilo, ukwenziwa, ukuthengisa kunye nenkonzo.
Ukutshintshwa koLawulo lweLizwi eliLuhlaza okwesibhakabhaka ...
SAMSUNG Replacement IR Remote ulawulo BN59-0119 ...
SAMSUNG Ukutshintshwa koLawulo lwe-IR kude kude BN59-0086 ...
SAMSUNG Ukutshintshwa kweBlue-tooth Voice Smart TV R ...
I-2.4G yeAudio Smart TV yokuLawula kude
Hi ukuhambelana kokuKhangela ukuKhangela ngokuLungeleleneyo okuhambisa umgama.
Faka endaweni yolawulo lweRands kude lweeRandi ezinkulu ngokusebenza ngokupheleleyo. Inkxaso yeYouTube eshushu, iNetflix.
Ulawulo olukude lwe-OTT
Indawo ekude ye-IR ekuKhangela kuyo ukuSebenza kunye nenkxaso yesitshixo esishushu: iYouTube, iNetflix, HULU, neRakuten TV.
11 Ngamana 2021
06 Ngamana 2021